VaMutambara veZim PF Votsigirawo Mubatanidzwa weMapato
Agripp Mutambara (center)
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe People First, Zim PF, VaAgrippa Mutambara, vanoti vanotsigira hurongwa hwekuti mapato ezvematongerwo enyika anopikisa abatane mukubvisa hurumende yeZanu PF.
Vachitaura kuchitsama chevatsigiri vebato iri nemusi weMugovera kwaMutare, VaMutambara vakati vanoda hurongwa uhu kuedza kusapatsanura mavhoti musarudzo dzegore rinouya.
VaMutambara vakati kuva nenhengo imwe chete inomirira mapato anopikisa musarudzo dzegore chinhu chakanaka chose kana veruzhinji vachida kubvisa hudzvanyiriri hweZanu PF.
VaMutambara vakati bato ravo riri kusangana nematambudziko sezvo vasori nenhengo dzeZanu PF vari kupinda mubato iri vaine chinangwa chekuriparadza.
Vakatiwo huwori hwakomba mumapazi ose ehurumende, zvikuru kumapurisa uye nekumatare edzimhosva.
Vakatiwo hutsinye uye kusatonga zvakanaka kwaVaMugabe kwakatanga pavakawana mudzimai wechikidi, Grace Marufu.Vakati panguva yemudzimai wavo wekutanga, Sally Mugabe, VaMugabe vaive mutungamiri ane gwara, chiremera, uye rudo neruzhinji.
VaMutambara vakati nyika yave mumaoko aAmai Grace Mugabe nevamwe vakauya kuZanu PF manje-manje.
Mumwe wevatsigiri weZim PF vaive pamusangano uyu, VaMabhobho Zhamba, vanoti vakafarira mashoko aVaMutambara sezvo akapa hushingi kuti vamisidzane neZanu PF pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzegore rinouya.
VaMutambara, avo vaive Brigadier muchiuto, vaitsigirwa pamusanmgano uyu naVaKudakwashe Bhasikiti, VaClaudius Makova nevamwewo.